Isiseko seQhinga loPhuculo loLuntu | Martech Zone
NgeCawa, uDisemba 14, 2014 NgeCawa, uDisemba 14, 2014 Douglas Karr
Ukungena ngokuchaseneyo nokuphumayo kuhlala kubonakala ngathi yingxoxo eqhubeka phakathi kwentengiso kunye nentengiso. Ngamanye amaxesha iinkokeli zentengiso zicinga nje ukuba banabantu abaninzi kunye neenombolo zefowuni abanokuthi bathengise ngakumbi. Abathengisi baziva becinga ukuba ukuba banomxholo kunye nohlahlo-lwabiwo mali olukhulu lokunyusa, banokuqhuba ngakumbi ukuthengisa. Zombini ziyinyani, kodwa inkcubeko yentengiso ye-B2B itshintshile ngoku xa abathengi banokwenza lonke uphando abaludingayo kwi-Intanethi. Ukwahlula phakathi kwentengiso kunye nentengiso kuyangqubana- kwaye kufanelekile!
Ngokwazi ukuphanda ukuthengwa kwabo okulandelayo kwi-intanethi kuza ithuba lokuba abaqeqeshi bezentengiso babonakale kwaye babandakanyeke apho umthengi efuna ulwazi. Iingcali zentengiso ezisebenzisa amandla omxholo kunye nokwakha igunya lazo kwindawo yazo zifumana iziphumo ezintle. Ukubhloga, imithombo yeendaba kwezentlalo, amathuba okuthetha, kunye nenethiwekhi yeshishini zonke ziindlela apho abantu abathengisayo banokuthi babonise amandla abo okunika ixabiso kwithemba.
Ukuthengiswa kweB2B, abathengi kunye nesiCwangciso sokuThengisa kwezeNtlalo
Yiba khona apho umthengi akhoyo -I-LinkedIn, i-Twitter, amaQela eFacebook, kunye nezinye iisayithi zeshishini zonke ziziza ezinkulu zonxibelelwano apho iingcali zentengiso zinokufumana abathengi okanye zenze igama elihle.
Nika ixabiso, yakha ukuthembeka -Ukugcina umxholo, ukuphendula imibuzo, kunye nokubonelela ngoncedo kubathengi (nangaphandle kwemveliso kunye neenkonzo) kuya kukunceda wakhe ukuthembeka.
Ixabiso + lokuthembeka = igunya -Ukuba unedumela lokunceda abanye kukwenza ube sisibonelelo esithengisa kakhulu. Abathengi be-B2B abafuni ukuvala nomthengisi, bafuna ukufumana iqabane elinokunceda ishishini labo liphumelele.
Igunya likhokelela ekuthembekeni Itrust sisiseko apho wonke umthengi we-B2B enza isigqibo. Ithemba lisisitshixo kuwo onke amathuba eshishini kwi-Intanethi kwaye sisithintelo sokugqibela kwisigqibo sokuthenga.
Ithemba likhokelela ekuqwalaselweni -Ukuba uthembile umthengi, baya kufikelela xa bebona ukuba unako ukubanceda.
Ukuqwalaselwa kuya kusondela! -Nonke ingcali enkulu yokuthengisa ifuna nje ithuba lokuqwalaselwa ukuze ikhanye kwaye isondele.
Kukho intetho eninzi malunga nokutshintsha kokuthengisa kunye nembonakalo yokuthengisa. Kodwa olu luvo luqhutywa yinto enye ebalulekileyo: umthengi. Indlela abantu abathenga ngayo iimveliso kunye neenkonzo kwi-intanethi zitshintshe kakhulu kule minyaka idlulileyo- kwaye kwezi ntsuku, abathengi banamandla ngakumbi kunakuqala. Ukuqonda ngakumbi malunga nefuthe kubathengi banamhlanje, sibeke i-infographic etyhila izizathu zabo. Zeziphi iintlobo zomxholo ezivakala ngakumbi kubathengi? Bathembele kubani? Zeziphi izixhobo ekufuneka uzisebenzisile ukwenza lula inkqubo yokuthenga? UJoseph Sanchez, Intengiso yoBomi.
Abantu bathenga kwiinkokeli zokucinga ezibonakalayo apho umthengi we-B2B efuna ulwazi kwaye abonelele ngolwazi olufunwa ngumthengi. Ngaba abantu bakho abathengisayo bakhona?
tags: b2bb2b abathengib2b ukuthengisa kwezentlalointengiso yemidiya yoluntuiqela lokuthengisaukuthengisa kwezentlalo